Cashirada Tukaha laga barto ee horumarka lagu gaaro - BAARGAAL.NET
Home Tuke wax ka ogow Cashirada Tukaha laga barto ee horumarka lagu gaaro
David Hughes, oo ah nin Shimbiraha xannaaneeya ayaa yiri: "Si guud marka loo eego shimbiraha oo dhan, tukaha waa xayawaan aad iyo aad u caqli badan oo waxyaabo badan laga faa'iideysan karo".
Horay ayaa loo soo tabiyay sheekooyin ku saabsan mucjisooyinka u gaarka ah Shimbirkan, balse tani waa mid faa'iido weyn u leh bani'aadanka.
"Iyagoo halabuurnimo adeegsanaya ayey xallin karaan xujo walba, waayo waxay isu geynayaan xirfado ay barteen oo ay dib usoo xasuustaan, waxayna caqabaddii u xallinayaan hab ay si gaar ah usoo hindiseen".
"Wax ayey arkeysaa , kadib madaxa ayey ruxeysaa isla markiina waxaad arkeysaa sida ay uga shaqeyneyso helitaanka waxaas".
James Dyer, wuxuu khabiir ku yahay xirfadaha lagu badbaadiyo nafta, wuxuuna isagoo arrintan sharraxaya yiri: "Waxaa jirta xigmad military oo dhaheysa ;'caqabadda marka hore fahan, ka dib la qabso, ugu dambeynna ka gudub'. Taasi runtii waa dhanka wanaagsan ee laga eegi karo wax walba".
Shimbirka Tukaha wuxuu si caqliyeysan uga gudbaa caqabadaha soo wajaha, taasoo dadkuna ay ka faa'iidi karaan inay dhibaatada la qabsadaan, oo la tacaalaan halkii ay ku niyad jabi lahaayeen.
"Waxay sameystaan qalab ay dadaal farabadan ku bixiyaan, kaasoo ay hal dhinac ka dhigaan mid adag dhinaca kalena ka jilicsan oo dhankii la doono loo wareejin karo, ka dibna waxay u adeegsadaan inay dhulka ku qodaan ugana soo baxsadaan cuntadooda", ayey tiri Marwo Hooper.
Bani'aadanka waxaa muhiim u ah inay lacagta keydsadaan, laakiin arrintaas dad badan waxaa ka heysata caqabad.
Waxay cilmi baareyaashu sheegeen in muddo dheer la aaminsanaa in sugitaanka waxa wanaagsan ee soo daaha uu dhif iyo naadir ku yahay bani'aadanka iyo xayawaannada, laakiin hadda la ogaaday in Tukaha uu si joogto ah ugu xisaabtamo faa'iidada soo daahda.
Haddaba cashiradan ayaa loo arkaa kuwo wax ka tari kara dhinaca horumarka bani'aadanka, markii dhanka kale loo rogo, iyadoo tusaale uun laga qaadanayo, waxaana jira sheekooyin kale oo ku saabsan shimbirka Tukaha.
Xigasho © BBC. BBC-Somali
Cashirada Tukaha laga barto ee horumarka lagu gaaro Reviewed by Admin on May 20, 2020 Rating: 5
Tags : Tuke wax ka ogow
wax ka ogow